सेप्टेम्बर 8, 2016 साइन्स इन्फोटेक
२०७३ भदौ २२, काठमाडौं ।
न्युटनको चालसम्बन्धी तेस्रो नियम त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै एक जना शिक्षकले चुनौती दिएका छन् । नवलपरासी जिल्लाको सेमरीस्थित आदर्श ईंग्लिश बोर्डिङ् उच्च माविका विज्ञान शिक्षक समेत रहेका राजकुमार थापाले आफूले ८ महिना लगाएर अनुसन्धान गरेर उक्त निश्कर्ष निकालेको समेत दाबी गरे । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै थापाले हरेक अवस्थामा बराबर र विपरित प्रतिक्रिया नहुने घट्नाहरु पनि ब्रम्हाण्डमा घटिरहेका हुनाले उक्त न्युटनको चालसम्बन्धीको तेस्रो नियममा त्रुटि रहेको र उक्त नियमलाई सच्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
प्रयोगात्मक विधिबाट गणीतीय हिसावले उक्त सिद्धान्तमा प्रशस्तै त्रुटि रहेको उनको दावी छ । कुनै पनि पदार्थहरु एक आपसमा सम्पर्कमा आउँदा उनीहरुले दिने क्रिया र प्रतिक्रिया पदार्थको अवस्था र तिनीहरुको बनोटमा भर पर्ने उनको निस्कर्ष छ ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै थापाले ८ महिना लगाएर अनुसन्धान गरेर उक्त निस्कर्ष निकालेको दावी गरे । नास्ट र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भौतिक विभागमा यसबारेमा जानकारी गराईसेको उनको भनाई छ । आफ्नो खोज तथा अनुसन्धानलाई उनीहरुले स्विकारे पनि अन्र्तराष्ट्रिय समूदायले माने पछि मात्रै नेपालले पनि मान्ने बताएकोले आफूले सार्वजनिक गरेको उनले बताए । २०४६ सालमा नवलपरासीको जमुनियामा जन्मिएका थापा बुटवल बहुमुखी क्याम्पसबाट स्नताक हुन् ।
नयाँ अवधारणाबारे थापा
हामीले विज्ञान विषयमा प्रसिद्घ वैज्ञानिक सर आईज्याक न्युटनले प्रतिपादन गरेको चाल सम्वन्धि तेस्रो नियम पढ्दै र पढाउँदै आएका छौैँ । यस सिद्दान्तलाई १७ औँ शताब्दीमा प्रतिपादन गरिएको थिए र आजसम्म यस नियमलाई पढ्दै आईरहेका छौँ । यस नियमले के भन्छ भने यदि हामीले कुनै वस्तुमा वल लगायौँ भने प्रतिक्रिया अवस्य हुन्छ । प्रतिक्रिया विनाको क्रिया सम्भव हुँदैन । यस कारण क्रिया र विपरीत प्रतिक्रिया बराबर हुन्छ ।
चाल सम्वन्धि तेस्रो नियम यस प्रकार छ । हरेक क्रियामा वरावर र विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ ।
धेरै उचाइबाट गद्दामा हाम फाल्दा चोट लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ । किनभने माथितिरबाट हाम फाल्दा गद्दामा वढी क्रियात्मक बल लाग्छ । तर गद्दाले दिने प्रतिक्रियात्मक बल कम हुन्छ । त्यसकारण चोट लाग्दैन । यस अवस्थामा फरक दिशामा लाग्ने यी दुई प्रकारका बल बराबर हुदैनन् भने हरेक क्रियामा वरावर र विपरीत प्रतिक्रिया कसरी हुन्छ ?
अघि भनिएको अवस्थामा क्रिया र प्रतिक्रिया बराबर नहुनुमा घर्षण,पदार्थको अवस्था नै प्रमुख कारण हुन् । अव हामीले हरेक क्रियामा वरावर र विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ भनेर कसरी मान्ने ?
हामीले पढ्ने गरेको न्युटनको तेस्रो नियम क्रिया र प्रतिक्रिया बराबर हुने अवस्थाको उदाहरण दिएर एकोहोरो रुपमा मात्रै परिभाषित भएको छ । तर क्रिया र प्रतिक्रिया बराबर नहुने अवस्थाहरु पनि थुप्रै छन् । तर, यी कुराहरु वारेमा व्याख्या गरेको पाईदैन । यस्ता घटनाहरु हाम्रो ब्रह्माण्डमा थुप्रै भैरहेका हुन सक्छन् जसलाई ख्याल गरेका छैनौँ ।
न्यूटनको चाल सम्बन्धि तेस्रो नियम सबै ठाउँमा नलाग्न सक्छ जुन कुरा प्रष्ट भै सक्यो । यो एउटा गम्भिर समस्या विषय वन्न सक्छ । यस तथ्यहरु विधार्थीहरुले पढिसकेपछि संसारभर यहि प्रश्न सोधेभने के जवाफ दिने ? यदि यी कुराहरुलाई लुकाएर किताबमा मात्र घोकाउने हो भने विज्ञानलाई वृहत रुपले बुभ्mन खोज्ने मस्तिष्कहरु संकुचित हुन्छन् । बरु यसलाई परिमार्जन गरेर हामी यसो भन्न सक्छौँ ।
कुनै पनि पदार्थहरु एक आपसमा सम्पर्कमा आउँदा उनीहरुले दिने क्रिया र प्रतिक्रिया पदार्थको अवस्था र तिनीहरुको बनोटमा भर पर्छ । यो सिद्धान्तले क्रिया र प्रतिक्रिया बराबर हुने र नहुने दुवै अवस्थालाई उल्लेख गर्दछ । र न्युटनको चाल सम्वन्धि तेस्रो नियमले समेट्न नसकेको कुरालाई पनि व्याख्या गर्न सक्छ । त्यसकारण राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय वैज्ञानिक संस्थाहरुले नै सम्वोधन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
← स्वस्थ जीवनकाे रहस्य
नेपालले आफ्नै भूउपग्रह स्थापना गर्ने →